Ergamtoota Waliin Tokkummaa Akeekaa Hin Qabnu! -
Ergamtoota Waliin Tokkummaa Akeekaa Hin Qabnu!
Ergamtoota Oromoo irraa qawwee hiiksiisan waliin tokkummaa akeekaa qabna jechuun mataa isaatiin diinummaa qabsoo Oromoof qaban muldhisa.
Dur hoggaa Oromoon gabroomfattootaan cabuu kan diinoota waliin Oromootti duulee daangaa fi dagaa akkasumaas mirgaaf hiree Oromoo sarbisiisaa turee diinota ilmaan weeraartootaan cinaatti ilmaan Oromoo dantaanis tahee beekanii diina waliin hiriirantuu gabroomuu saba Oromoof gahee taphaataan. Of duuba deebinee yoo ilaallee daaccee xadduu abbaan goobanaa kan abbichuu diinaan qabachiise nama diinaagdeef jedhee waraana deemee bitamee lolaa tureedha, sabaabuma kanaan Oromootti diinaa waliin duulee Oromoo cabsisiise. Rakkoon akkanaa kun iddoodhuma hunda jiraa, namoonni akkasii kun qabsoo bilisummaa Oromoon godhaa jiruuttis gufuu jabaa tahaa turaan, qabsoon bilisummaa Oromoo galii barbaadamee gahuu akka hanqatuuf shiraa jajjabaa dalagaa as gahaan. Lukkeewwaan kunniin ergama itti kennaame galmaan gahuuf waan hin goone hin qabaan.
Duulli saba Oromoo cabsuu kan karaa hundaan tahaa turee milkii malee lubbuu qulqulluu balleessaa har’a gahee. Duula warrii gaggeessaan injifannee kan nu dhiibuu fi raasu hin jiruu osoo jedhaanuu humna cunqurfamtootaan qilee bu’aa as gahee, kana keessaatti sabni Oromoo gootummaan lolee diinoota inniikaa isaa injifachaa turee. Haa tahuutii garuu Oromoonni warraa diinan oofamaan ykn ammo diinoonni oromummaa uffaatan yeroo hedduuf warraaqsa Oromoo karaa dabarsuun injifannoo Oromoon lubbuuf dhiiga isaa itti kaffaaluun asiin gahee diinoota Oromoo badhaasaa asiin gahaan. Faallaa kana sabni Oromoo ammo qabsoo dhiiga isaa itti lolaaseen gabroomfataa dullaacha ofirraa buusudhaan garboomfataa haaressa waanjoo garbummaa jalaa galaa as gahee. Bara dhufaa darbaa injifannoo mana Oromoo seene ilmaan Oromoo diinaaf gugguufanii fi diinoota maqaa Oromootiin deemaniin ugguuramaa turee,
Yeroo kanaattis yeroo qabsoon Oromoo fiixee gahee jiruutti diinoonni Oromoo qabsoo kana of duuba deebisanii mooraa diinoota Oromoo injifannoon faayuuf tattaafataa jiruu. Haala kanaan qabsoo bilisummaa Oromoon warraaqsa diddaa gabrummaa finiinsuun gaggeessaa turee butuuf humna isaa laamsheessuuf akka isaaniif mijatuuf qawwee Oromoo harkaa funaanuun humna dhorguuf tattaafataa turaan. Gantoonni bilisummaa Oromoo hin feene akeeka diinaa akka kaayyootti baatanii falmattoota haqaa shiraan nyaataa as gahaan. Kana keessaatti araara jedhanii aadaa boonsaa Oromoon qabuu fayyaadamuun marroo hedduuf akkuuma qabsoo Oromoo gataachiisaa turaan ammaas yaalaa jiruu. Haa tahuutii karaalee siyaasaas diinummaa garbomfataan dalagaa jiruuf dahoo kennuuf tattaaffiin isaan godhaan guddaadha. Sabnii Oromoo akka wal hin taaneef tooftaa qoqqoodanii bituu mootummaan baase galmaan gahuuf shiraa dalagaa jiruu. Kutaa gamtokkoo oromiyaa gabroomfataan waraanan cabsuuf duula yoo itti banuu jala deemtoonni diinaa kun ammo kallaattii hafeen siyaasaan cabsuuf holoola Oromoo wal dhaggeeffachuu dhowwuu gaggeessaa jiruu. Daaboon Oromoo cabsuu siyaasaa fi waraanaan dabaalamee gaggeeffamaa jiruu kan qabsoo Oromoo balleessuuf itti yaadanii maqaa tokkuummaa Oromoo golgatanii adeemaa jiraan tahuu Oromoon akka hubaatu waamiicha dhiheessina.
“Anii ibiiddaa waraanatiinaan haleelaa atimmoo siyaasaan itti naaf hafarsii” tumsa diinoonni qabsoo bilisummaa Oromoo quucarsuuf wal tahiinsaa uumaa jiraaniidha. Kanaaniis kutaa Oromoo gamaaf gamanatti gargaar qoodanii abjuu miniliikf amaartoonni waggaa hedduuf abjootaa turaan milkeessaa jiruu. Qabsoo Oromoo sadarkaa gadiitti gad deebisanii uummaata Oromoo kutaan qoodanii siyaasaaf waraanaan duula ijiibbaataa saba Oromoo cabsuuf adeemamaa jiruuf tumsa taasisaa kan jiraan ilmaanuma Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin shubbisaaniidha. Duula duguugga bara miniliikii jalqabee Oromoo irraatti adeemaa jiruu, kan gamtokkoon akka sabnii Oromoo cabuuf karaa saaqaan ilmaan Oromoo dantaan bitamuun diinaa waliin hiriiraa turaaniidha. Yeroo kanaattis waggoota danuuf qabsoo saba Oromoo humna dhowwuuf warreen waraana bilisummaa Oromoo diiguuf qawweewaraana Oromoo irraa hiikuuf ergaama abaaramaa nafxanyaa fi faashistootaa baatanii deemaa turaan, amma immoo duula siyaasaa akeeka ABO fi WBO balleessuuf dalagaa jiruu. Dahaanna filaannoo seera hin guutneetiin uummaata Oromoo keessaatti qoqqooddaa siyaasaa diriirsudhaan uummanni Oromoo akka wal dhagayee birmatee humna waliif hin taaneef shira dalagaa jiruu. Shiraa uummaata Oromoo bakka garaagaraatti qooduun akka diinni duula siyaasa fi waraanatiin burjaajessuuf karaa saaqaa kan jiraan maqaa siyaasa Oromoo golgatanii kan deemaan kana uummaanni Oromoo hubatee akka irraa of eegu waamiicha dhiheessinaa. Shirrii kuniis tahee jedhanii itti yaaduun saba Oromoo irree naaffisuuf yaaliin WBO qawwee hikkaachiisuu milkaayuu waan dideef tumsa uummataatiin alaatti irree waraana bilisummaa Oromoo laaffisuun akeeka qabsoo kan Oromoon baroota hedduuf aarsaa itti kaffaalaa turee fashaalsuuf yaalii gaggeessaa jiruu.
Ajajaa olaanaan ABO/WBO haala ammaan kana deemaa jiruu kana waan hubaateef waggaa tokkoo dura jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo caalatti jabeessuun yeroo afaan faajjiin uumamee galmi qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsuuf diinoonni shiraa xaxuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sabaatiinsa dhowwaa turaan keessaatti muaannoo jabduudhaan murtii boonsaa fudhaachuun har’aan gahee. Kana hubaachuun uummaanni Oromootiis addunyaa kana irraatti sabni gabroome kan bilisoomuu qabsoo hadhooftuu gaggeessuuni malee gabroomfataa kadhatee akka hin taane hubaachuu qaba. Wareegama kaffaalama as gahee firii itti godhuun kan danda’aamu humna diinaa hidhatee duguuggaa sanyummaa saba Oromoo irraatti gaggeessaa jiruu hidhaannoon qoluu qofaan tahuu hubaachuun waraana isaa WBO cinaa akka dhaabbatu irra deebiin hubachiisna. Biyyaa akka Afrikaa mirgi dhalaa namaa keessaatti hin kabaajamne keessaatti qabsoo siyaasaatiin gaaffiin uummattootaa ni deebiyaa jedhanii yaaduun mataan isaa abjuudha. Gaaffii sabootaa kan abbaan irree ukkaamsuuf beekee fedhii mootummaa isaa fi umurii bittaa isaa dheereffaachuufi malee wallaalee mitii. Kanaafuu “nama dhagaaya rafuu, hin dammaaqu” akkuuma jedhaan sana mootummaa kanaas karaa nagaa filaannoodhaan gaaffiin saba Oromoo deebii argata jechuun gama tokkoon mootummaa kanaaf beekamtii kennuu yoo hin taane faayidaa tokkoollee hin qabuu.
Dhumarraatti gaaffiin saba Oromoo akka isan jedhaanittis yoo tahee bakka qaamni sadaaffaan mmuuxannoo waldhabdee furuu qabuu argaameetti mootummaa cehuumsaa ijaaramuun yoo taheen alaatti filaannoo shiraa cilee siyaasaa laaqqachuun akka hin taane hubaachuu feesiisa. Kanaafuu uummaanni Oromoo kana hubaachuun qabsoo isaa fiixaan baasuuf waraana bilisummaa Oromoo gaaffii saba Oromoo baachuu abjuu Oromoo dhugoomsuuf kufee kuffiisaa jiruu, waliin hiriiruun yeroon itti qabsoo isaatti xumuraa godhuu amma tahuu qaba. Beekaniis haa tahuu osoo hin beekiin anmoonni mootummaa saba Oromoo irraatti duguuggaa sanyuummaa gaggeessaa jiruuf beekamtii kennaan gochaan kun diinummaa tahuu hubaachuun akka irraa of qusaataan jennaa. Dhumaarraatti namoota qawwee WBO irraa hiikuuf shiraa xaxaa turaanii waliin Tokkummaa kaayyoo qabna jechuun diinummaa akka tahee AO~ABO/WBO isiin hubaachiisa.
Gurraandhala 13 2020
Ajajaa olaanaa ABO/WBO
INJIFAANNOON UUMMAATA OROMOOTIIF
← ALTRUISM AND OPPORTUNISM Ethiopia passes controversial law curbing ‘hate speech’ →
4 thoughts on “Ergamtoota Waliin Tokkummaa Akeekaa Hin Qabnu!”
Barakat Solomoon Abrihaam February 13, 2020
Oromoo dammaqi. Eertiraan Guraagee wajjiin seenaa qabdi. Abiyyi Guraagee dha. Afaan Oromoo dubbatee si hin gowwoonsin. Maddamariin summii Sirna Gadaa ti. Demokrasiinis si gaala. Waaqa kee qabadhuu, muldhii kee jabeeffadhuu murannoon falmadhu.Lammaa,Leencoo fii Jawaar maxxannee eha.Daawudis akkasuma.Dubbiin
Horaa, bulaa, hoffolaa.
gamtaa kalbeessaa February 13, 2020
“Lama nasuufan jettee …”. Warri har’a maqaa araaraatiin saba Oromoo irraa harka irreetti muruufi fiigu kun maaliifi mootummaa gabrooffataa kanaan harka kee saba kanarraa kaasii jechuu dadhabe? Ergamanii garaa guuttachuun knun yoom hafa laata?
Barakat Solomoon Abrihaam February 14, 2020
Sirni Gadaa Heera Oromoo ti. Abbaan Muudaa Utubaa Oromo ti. Walabummaan Oromoo Harka Keenya. Namootni Barana Abbaa Gadaa Ofiin Jedhan Eebba Abbaa Muudaa Dhugaa Soraa Lubbuu Waaqaa Lafaa Waaqa Aanfatnaa Biyya Dhugaa Mirkanaa It. Isa Saba Hor (Orom) Qomoon Shaggar Qubaan Madda Walaabuu Irraa Hin Fudhatne. Hojiin Namoota Abbaa Gadaa Booranaa, Gujii, Arsii (Sikkoo fii Mandoo), Tuulamaa, Maccaa, Ituu Morowwaa, Afran Qaldhoo, Karrayyuu, Anni
yyaa, Gabraa fii Hundi Isaanii Hojii Akkeessaa fii Fakkeessaa Irra Jiru. Jarri Kuni Caasaa Sirna Gadaa Hin Guutne. Caffeen Isaanii Saglan Yaa’ii Hin Qabu. Aangoo Hooggansa Guutuus Hin Qaban. Abbaan Muudaa Sirna Gadaa Akka Waaltessu Hojjechuu Hin Dandeenye. Akkanumaan Ummata Burjaajessu. Yeroo Ammaa Guutuun Oromoo Summii Sirna Gadaa ‘Maddamariin’ Yeroo Danqamee Diinni Keenya Hundi Nu Irratti Duuluuf Tuutchaa Akka Jiran Osoo Arganuu Hangafa Diinaa Doktara Basaasaa Abiyyi Ahmad Waaqeffatchuu Filatanii Jiru.
Kaleessa A.B.O.n Beekumsa Malee Doktara ‘Haakima’ Oromoo Ofiin Jedhee ..
Walakkaa Jaarraa Tokkoo Qisaasuu Isaa Malee Oromoo Wareegama Ulaagaa Hin Guutne Baasisee Jira. Har’a Warri Bilisummaa Kadhaan Ni Argatna Jedhanii Kajeellaa Balbalaa fii Karra Miniilik Oolan Leencota Lameen, Daawud, Jawaar, Mararaa, Lammaa, Xayyibaa, Amiin, Junaydi, Kamaal, Hayluu fii kkf Hundi Ummata Burjaajessuu Malee Akka Milkaa’uu Hin Dandeenye Garaan Jaraa Tolchee Beeka.
Mootummaam Itiyoophiyaam Saba
Oromoo Akka Lammii Biyyaatti Hin Fudhatu. Jawaariin Lammii Isaa Godhatee Baateen Tapha.
Madaa Oromoon Baacuu Dha. Akkuma Filisxeem Israa’eel Jibbitu, Sanyibalfoon Gitni Bitaan Itiyoophiyaa Oromoo Aanfatee Aangoo Nutti Kenna Jechuun Ofis Ilmaan Ofiis Gowwoomsuu Ta’a…